Rosia: Bilaogera nosamborina noho ny tsaho momba ny pesta aretitratra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Mey 2019 5:13 GMT
Nosamborina ny 3 Desambra 2009 i Ivan Peregorodiev, mpianatra ho mpitsabo sady bilaogera 22 taona, noho ny fanelezana tsaho momba ny pesta aretitratra tao an-tanàndehiben'i Saratov. Niampanga azy ho nanely vaovao tsy marina mifandraika amin'ny asa fampihorohoroana ny manampahefana. Ny 2 Desambra 2009, niadihevitra tamin'ny filazana fa nisy mponina maro tao Saratov no voan'ny virosy H1N1 ireo bilaogera Rosiana. Nilaza ny tsaho fa nanafina ny fahafatesana maro nateraky ny gripan-kisoa ny manampahefana ary efa teo am-panakatonana ilay tanandehibe iray manontolo ho an'ny fanadiovana. Tatỳ aoriana, nanomboka niresaka momba ny tranganà pesta aretitratra ny olona ka nitana ny ivontoeranam-pikarohana “miady amin'ny pesta” tao an-toerana ho tompon'andraikitra. Lasa nafana ny toe-draharaha satria nampiato ny fitsidihany tany Belarosia ny governoran'i Saratov Pavel Ipatov ary niverina tany an-tanàndehibe mba hamaha ny fitarainam-bahoaka. Nihaika ny fanambarana ofisialy izay nanda ny fisian'ny pesta aretitratra ny famoahan-dahatsoratra avy tamin'ny tranonkalam-baovaon'ny tambajotra sosialy Rosiana izay nataon'i Ivan Peregorodiev, fantatra amin'ny anaran'ny mpisera lj hoe iperegorodiev ( naato ny kaontiny tamin'io fotoana io):
Mety ho voan'ny pesta isika. “Niteraka sahotaka ny vokatry ny fandidiam-paty natao tamin'ny olona maty vokatry ny gripan-kisoa – izay nanjary azo jeren'ny daholobe. Araka ny filazan'ny vavolombelona nanatri-maso, ​​ nitovy tamin'ireo tranganà pesta aretitratra nofaritana tao amin'ny literatiora ara-pitsaboana ny vokatry ny fahasimban'ny havokavoka. “(http://smi2.ru/saratoff/c243648) Milaza ny marina ve ny manampahefana eto amintsika rehefa tsy milaza ity vaovao ity izy ireo? Mikasa ny handraraka fanafody mamono otrikaretina ho vahaolana amin'ny pesta aretitratra izy ireo amin'ny alàlan'ny angindimby androany … PS Ary indro misy iray hafa http://www.epidemiolog.ru/prof/index.php?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=3868
Notohizany tamin'ny lahatsoratra iray hafa izany ora vitsy taorian'ilay voalohany:
Fa misy inona? Ry vahoaka, ity no vaovao farany avy amin'ny tobin'ny areti-mifindra: efa tafakatra anaty angindimby ireo fanafody mamono otrikaretina. PS Lasa tena zava-misy ny sarimihetsika Amerikana momba ny Apokalypsy .
Nolavin'ny manampahefana tao an-toerana ny tsaho momba ny pesta saingy nanamafy ireo trangana gripan-kisoa miisa 17 izy ireo. Niaiky ihany koa ireo manampahefana fa feno ny hôpitalin'ny tanàndehibe ary tsy ampy firy hividianana vakisiny hiadiana amin'ny H1N1 ny tetibolan'i Saratov. Nahita ny hafatr'i Peregorodiev nitovy tamin'ny iray izay nanamafy ny fisian'ny fisahotahana tamin'ny gripan-kisoa tao Okraina iray volana lasa izay ny bilaogera sasany. Tahaka ny tranga tany Saratov, nahitana “angidimby nandraraka rano-panafody miady amin'ny otrikaretina” ihany koa ny honohono tany Okraina Nanambara haingana ny fikasan'izy ireo hitady ilay mpanely tsaho ny Biraon'ny Mpampanoa Lalàna ao Saratov ary i Ivan Peregorodiev no voalohany nosamborina tamin'izany. Voampanga ho ninia namoaka “vaovao tsy marina mifandraika amin'ny asa fampihorohoroana” izy (andininy faha-207 amin'ny Fehezan-dalàna Famaizana Rosiana). Tsy nanazava ny fifandraisan'ny vaovao avy amin'ny bilaogin-dahatsoratr'i Peregorodiev sy ny tsaho momba ny pesta areti-tratra amin'ny asa fampihorohoroana ny Biraon'ny Mpampanoa Lalàna . Nanomboka fanentanana mba hanafahana an'i Peregorodiev ny Ivontoerana ho an'ny Hetsika Iombonana, fikambanana Rosiana tsy mitady tombontsoa. Nilaza ireo mpikatroka fa nampihatra ny zony amin'ny fahalalahana miteny ity bilaogera ity raha mametraka fanontaniana momba ny fanambarana ofisialy avy amin'ny manampahefana ao Saratov.
VAOVAO FARANY: Navoaka ny fonja i Ivan tamin'ny 4 Desambra 2009 saingy mbola ahiahiana ho nanao heloka bevava, hoy ny tatitry ny Novaya Gazeta.